Global Voices teny Malagasy » Naaton’ilay tanàna shinoa ny ‘lalànan’ny fahaiza-miaina’ taorian’ny tsikera anjotra · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 23 Septambra 2020 4:30 GMT 1	 · Mpanoratra The Stand News Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Azia Atsinanana, Shina, Mediam-bahoaka, Politika, Teknolojia, Zon'olombelona
Dika avy amin'ny tantara shinoa nivoaka tao amin'ny  Stand News tamin'ny 7 Septambra 2020. Navoaka etoana indray araka ny fifanarahana fiombonana votoaty.
Ny fahombiazana tamin'ny fametrahana ny “kaodin'ny fahasalamana”  amin'ny famerana ny fivezivezen'ny mponina mandritra ny areti-mandringana COVID-19, Suzhou — tanàna shinoa iray manakaiky an'i Shanghai — no nikasany hametraka ny “kaodin'ny fahaiza-miaina” tamin'ny voalohandohan'ny volana Septambra handahatra ny fahaiza-miainan'ny olompirenena sy ny valisoa na sazy mifanaraka amin'izany. Saingy ny fiontanana matanjaka avy amin'ny mpiserasera no nanery ny manampahefana hanemotra amin'ny fotoana manaraka ny volavola.
Ny kaody ara-pahasalamana dia rafitra kaody mitsongo dia ny toetra ara-pahasalaman'ny olona iray sy manaramaso ny fivezivezeny araka izany. Nampidirina tany amin'ny fampihatram-pinday maro ny rafitra ka ao anatin'izany ny Alipay .
Ny tanànan'i Suzhou, fantatra ho “Venizin'i Atsinanana,” no iray amin'ireo tanàna voalohany namoaka ny kaodm-pahasalamana tamin'ny Febroary 2020. Nampidirina tao amin'ny fampihatra iray nantsoina hoe “kaodin'ny tanànan'i Suzhou” (蘇城碼), izay karapanondro dizitaly hanarahamaso ny fivezivezen'ny mponina rehetra mandritra ny fiparitahan'ny COVID-19 ny kaodim-pahasalamana. Ny tanànan'i Suzhou ihany koa no iray amin'ny tanàna ampolony voafidy  tamin'ny taona 2018 hamelona andrana amin'ny rafitra fitokisana ara-tsosialin'i Shina handahatra ny fihetsiky ny olompirenena sy hametraka ny paika fanomezana valisoa sy fanasaziana.
Na dia mavesatra aza ny fepetran-tsivana, nanafotra ny sehatra fampitam-baovao sososialy ny fitsikerana ilay volavola. Iray amin'ireo izay tena nitabataba nitsikera i Yu Jian-rong, mpahay fiarahamonina shinoa malaza. Toa izao ny nolazainy  tao amin'ny Weibo:
Rehefa nahazo tsikera avy amin'ny mpiserasera, nanambara ny Ôfisin'i Suzhou misahana ny fananganana sivilizasiona ara-panahy — sampana iray ao amin'ny Departemantan'ny Propagandy mikendry hampiroborobo ny fihetsik'olompirenena tsara — tamin'ny  6 Septambra fa nifarana ny dingana fanandramana ny kaodin'ny fahaiza-miaina ary hanova ny rafitra ny fahefana misahana izany, izay ho ampiharina rahatrizay.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2020/09/23/149749/
 “kaodin'ny fahasalamana”: https://www.nytimes.com/2020/03/01/business/china-coronavirus-surveillance.html